Madaxweynaha oo boqolaal ruux salaada Ciida kula dukaday Masaajidka Isbaheysiga (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 17 July 2015 17 July 2015
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed kala qeybgaley salaadda Ciidul Fidriga oo ka dhacdey Masjidka Isbahaysiga ee magaalada Muqdisho.
Salaadda Ciidul Fidriga ayaa waxaa Madaxweynaha kala qeybgaley Guddoomiyaha Baarlamanka Federaalka, Mudane Maxamed Cusmaan Jawaari, xubno ka tirsan labada gole, taliyeyaasha ciidammada iyo mas’uuliyiin kale.
Intaasi kadib Madaxweynaha waxaa uu gurigiisa xaflad kooban ugu qabtey mas’uuliyiinta dowladda iyo labada gole.
Xog: Suldaanka ugu miisaanka culus Somaliland oo qaatay midnimada SOMALIA